माधव नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध मुद्दामा सर्वोच्चले के दियो आदेश ? — Imandarmedia.com
माधव नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध मुद्दामा सर्वोच्चले के दियो आदेश ?
काठमाडौ। एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेको र त्यसलाई वैधानितकता दिएको विरुद्धमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनको पेसी २७ गतेका लागि तोकिएको छ।
नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका १४ जना सांसदविरुद्ध ओलीले दायर गरेको मुद्दाको पेसी संयुक्त इजलासमा आइतबार तोकिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजासलमा परेको सो मुद्दामा यसअघि गरिएको आदेशका कारण सुनुवाइ हुन सकेन ।
न्यायाधीश सुवेदीले एकीकृत समाजवादीमा रहेका सोमप्रसाद पाण्डे सम्बन्धित मुद्दामा आफूले आदेश दिएको र ओलीले दायर गरेको मुद्दामा पनि पाण्डे प्रतिवादी रहेकाले हेर्न नमिल्ने जानकारी गराएका थिए।
ओलीले दायर गरेको मुद्दा सुनुवाइका लागि चैत २७ गते पेस गर्न न्यायाधीश सिन्हा र सुवेदीको इजलासले आदेश जारी गरेको छ।
‘प्रस्तुत मुद्दा इजलासबाट सुनुवाइको मिति तोकि आज पेसी हुन आएको देखिँदा अर्को सुनुवाइको लागि मिति २०७८ चैत २७ गते को पेसी तोकिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसहितका १४ सांसदमाथि कारबाही कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
यसअघि नेपाल पक्षका वकिलले आइतबारको सुनुवाइ सार्नका लागि अघि सारेको निवेदनलाई इजलासले अस्वीकार गरेको थियो।
तेस्तै, नेकपा एमालेबाट निर्वाचित बेदकोट नगरपालिका मेयर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन्। बेदकोट नगरपालिका मेयर अशोक चन्द समाजवादीमा प्रवेश गरेका हुन्।
उनलाई समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्वागत गरेका छन्। मेयर चन्दसँगै बेदकोट नगरपालिकाका विभिन्न पाँचवटा वडाका वडाअध्यक्ष पनि समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन्। त्यस्तै पार्टीका जिल्ला कमिटीका अन्य नेताहरू पनि समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन्।
मेयर चन्दसँगै वेदकोट नगरपालिकाकै वडा नं ३ का अध्यक्ष तिलक ठकुल्ला, वडा नं ४ का अध्यक्ष भास्कर भट्ट, वडा नं ७ का अध्यक्ष वीरबहादुर डगौरा, वडा नं ७ का अध्यक्ष दुर्गासिंह भण्डारी , वडा नं १० का अध्यक्ष केशव रावलसंगै वडा नं १० का वडासदस्य डम्बर दत्त भट्ट पनि एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन्।
त्यस्तै नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरु दलवीर टमटा, तारा रैकाल, निर्मला विष्ट चौधरी, पिंकी दमाइ र माया बोहरा तथा २२ जना वडासदस्य एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेकाे छन्।
वेदकोटमा एमालेले मेयर, उपमेयरसहित १० वटा वडामध्ये ८ वटामा वडाध्यक्ष जितेको थियो। उपमेयर सुशीला सिंह भने एमालेमै छिन्। एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य गजेन्द्र राना लगायत छन्।
जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य हरिराम चौधरी, जिल्ला सचिवालय सदस्य तथा बेदकोट नगर कमिटी अध्यक्ष महेशराज जोशी लगायतका नेता तथा कार्यकर्ता समेत समाजवादीमा प्रवेश गरेका हुन्।
१० वटा वडा रहेको बेदकोट नगरपालिकामा आठ वडाअध्यक्ष एमालेले जितेको थियो। चन्दकै कारण बेदकोट नगरपालिकामा एमालेको राम्रो प्रभाव थियो।
एमालेमा रहँदा माधव नेपाल समूहमा रहेका चन्द नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशनमा सचिव पदमा लडेका थिए। जहाँ उनी पराजित भएका थिए। पार्टी विभाजनसँगै पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्दै आएका चन्द अन्ततः समाजवादीमा लागेका हुन्।